राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीका खातामा आयो एक वर्षको पारिश्रमिक, कसले कति पाए ? - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीका खातामा आयो एक वर्षको पारिश्रमिक, कसले कति पाए ?
काठमाडौंः नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीले आफ्नो एक वर्षको पारिश्रमिक पाएका छन् । उनीहरुले सन् २०१९ को पारिश्रमिक पाएका हुन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका २२ खेलाडी तथा एक भिडियो एनालिस्टलाई एक वर्षको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको हो । क्यानले बुधबार सबैको खातमा रकम जम्मा गरेको जनाएको छ ।
‘ए’ श्रेणीमा रहेका खेलाडीले एक वर्षको एकमुष्ट रु पाँच लाख ४० हजार, ‘बी’ श्रेणीका खेलाडीले रु चार लाख २० हजार तथा ‘सी’ श्रेणीका खेलाडीले रु तीन लाख पाएका छन् । यस्तै टेक्निकल एनालिष्ट रमन शिवाकोटीले पनि ‘सी’ श्रेणीका खेलाडीको बराबर पारिश्रमिक प्राप्त गरेका हुन् ।
ट्याग्स: अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्, नेपाल क्रिकेट सङ्घ, राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी